Barcelona oo jaratay tikitka finalka Copa del Rey kaddib markii ay soo laabasho cajiib ah ku sameesay garoonka Camp Nou… + SAWIRRO – Gool FM
(Barcelona) 04 Maarso 2021. Kooxda Barcelona ayaa sameesay soo laabasho cajiib ah kulanka lugta labaad wareega afar dhamaadka Copa del Rey, kadib markii ay ku xasuuqeen naadiga Sevilla 3-0, Blugarana ayaa jaratay tikidkeeda kulanka finalka ah ee tartankan.
Qeybta hore ee kulankan ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda kubadda cagta Barcelona.
Daqiiqadii 12-aad kooxda Barcelona ayaa hoggaanka u qabatay dheesha waxaana 1-0 ka dhigay xiddigooda reer France ee Ousmane Dembele.
90+4 marka ay ciyaarta mareysay Gerard Pique oo caawin ka helay saaxiibkiis Antoine Griezmann ayaa dheesha ka dhigay 2-0 ay ku hoggaamineysay Barcelona, Blugarana ayaa neefta ku soo noqotay maadaama ay sameysay soo laabasho.
90-kii daqiiqo ee ciyaarta loogu tala galay ayaa waxay ku dhamaatay 2-0, waxaana loo baahday in waqti dheeri ah lagu daro dheesha, maadaama Sevilla ay kulankii lugta hore ee wareega afar dhamaadka ku soo adkaatay 2-0.
Daqiiqadii 95-aad ee waqtigii dheeriga ahaa ee ciyaarta lagu daray Barcelona ayaa dhalisay goolkeeda saddexaad dheesha, waxaana 3-0 ka dhigay Martin Braithwaite, kaddib markii uu caawin ka helay saaxiibkiis Jordi Alba.
Ugu dambeyntii wadarta guud ee labada lugood ayaa waxay ku soo idlaatay 3-2, maadaama kooxda Sevilla ay ku soo adkaatay kulanka lugta hore 2-0.
Horudhac: Liverpool vs Chelsea... (Liverpool oo qarka u saaran ineyn lumiso rikoor taariikhdeeda baal dahab ah kaga jiro)